Ambongadiny PVC fitambaran-tariby ho an'ny mpanamboatra tariby sy fametahana tariby ary mpamatsy | INPVC
Fitaovana: Resina pvc + additives momba ny tontolo iainana
Density: 1.22-1.35 g / cm3
Fanodinana: Fanosehana Extrusion
Ny fantsom-pifandraisana PVC dia fitaovana thermoplastic azo avy amin'ny fanodinana ny polyvinyl chloride kompositions, novokarina ho granules. Ny fananana isan-karazany dia omena fitambarana arakaraka ny fampiharana sy ny toe-javatra iasan'ny singa. Ny granules Cable PVC dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny tariby sy ny conducteur amin'ny fanamboarana insulation sy wire protection ary palitao.
Ny vovobony PVC General Sheathing grade dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora praiminisitra grady praiminisitra voalohany, manaraka tsara ny lalàna RoHS (Heavy Metal & Lead-Free). Izahay koa dia manome toetra hafanana avo, setroka ambany-halogen ary fananana tsy mahazaka afo, ka mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ny tariby sy tariby. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana fitambarana PVC ho an'ny tariby dia misy ny fahombiazan'ny vidiny, ny faharetan'ny lelafo ary ny faharetany.
Kodiarana sy tariby mitazona tariby
Tarehin-dambam-bolo sy fantsom-bolo
FR (Retardant Flame) fitambarana insulation
Kamban-tsakafo FRLS (Smoke Retardant Low Smok)
HR (Fanoherana ny hafanana) PVC Cable Granules
Kamban-teny mifanaraka amin'ny ROHS sy UL
Kamban-teny mifanaraka amin'ny UL
Mitondra fitambarana maimaim-poana
Kamban-kazo mifototra amin'ny calcium
Temperature mangatsiaka (-40 ℃) fitambarana fanoherana
70 ° C & 90 ° C PVC insulation Sheathing
80 ° C (ST1) & 90 ° C (ST2) Granules
Ny famenoana PVC dia nanome isa 70 ° C Granules
● Tariby sy tariby mandeha amin'ny fiara
● Tariby PVC Energy Energy
● Fananganana tariby sy tariby PVC
● Mihazona tariby sy tariby ny trano
● Tariby mandeha amin'ny herinaratra
● Telegrama tafavoaka velona amin'ny afo
● Tariby Solar Photovoltaic (PV)
● Paompy rendrika ao anaty rano ary tariby boribory
● Tariby fanaraha-maso elektronika
● Telegrama anatiny sy indostrialy
● Tariby coaxial
● Wire Wire mifono (Fefy Wire)
● Taratasy famantarana, fifandraisana ary data
● Tariby fifandraisan-davitra (tariby an-tariby, tariby fampitana data)
● Tariby manokana (tariby fampitaovana, tariby mpiara-axial, tariby fanaraha-maso, tariby fanairana amin'ny afo)
● Tariby herinaratra (Tariby ambany herinaratra, tariby tselatra antonony, tariby avo ary avo kokoa)
Endri-javatra fototra . Sariaka amin'ny tontolo iainana. Tsy misy fofona. Tsy misy poizina
· Faharetana tsara
. Miondrika fanoherana. Manohitra ny abrasion
. Fitaovana fanorenan-tany tena tsara
. Fisehoana Lossy na Matt
. Volavola namboarina
. Fananana simika sy fizika miavaka
Toetra novaina UV-mahatohitra
Alikaola manohitra solika / asidra / lasantsy / etil
Manoherana ny fifindra-monina
Miondrika fanoherana. Manohitra ny abrasion.
Famerenana mari-pana ambany
Halogen ambany-setroka ambany
Torohevitra feno fisakaizana
INPVC dia manamboatra karazana fantsom-pifandraisana PVC mahazatra, fa raha mitady vahaolana ho an'ny fampiharana manokana ianao, ny zavatra niainan'ny INPVC, tsy ny vatan'ny tariby PVC ihany fa ny PVC iray manontolo, dia afaka manampy amin'ny famoronana fantsona fantsom-pifandraisana namboarina ho anao manokana fepetra takiana.
Zahao amin'ny alàlan'ny karazana fitambaranay PVC ho an'ny tariby etsy ambony na miresaka amin'ireo manam-pahaizana momba ny teknika momba izay tadiavinao hahatongavana amin'ny fantsom-pifandraisanay ary jereo ny fomba ahafahanay manampy anao.
Teo aloha: PVC Granules ho an'ny tsindrona Slipper Uppers V-Straps
Manaraka: Fitaovana PVC ho an'ny fametahana horonan-tsary sy horonantsary fanontam-pirinty
Fitaovana PVC ho an'ny famonosana kely sy lable ...
Fitaovana malefaka polyvinyl chloride ho an'ny PVC Bo ...
PVC Granules dia mampiditra tsindrona tsindrona ho an'ny tongotra ...
Kamban-tànana PVC ho an'ny kiraro matevina sy mihosin-jaza ...
PVC Granules mangarahara ho an'ny Ankizy Kiddy ...